Technical University of Berlin - Study Engineering in Germany
University of Berlin Yokuxhumana
isifinyezo : ubhavu
Wasekelwa : 1946
abafundi (ngu.) : 3200.
Ungakhohlwa xoxa University of Berlin
Bhalisa at University of Berlin
With cishe 34 000 abafundi, circa 100 iminikelo course futhi 40 Institutes, mlando Technical University of Berlin ingenye emanyuvesi kunawo futhi iningi nasemhlabeni wonke ezidume lobuchwepheshe yaseJalimane. Akhiwe inhloko-dolobha yaseJalimane - at elaseYurophu - ezifezwayo ucwaningo kanye nokufundisa, azidlulisele amakhono ukuze abaphothule omuhle, kanye nokuphathwa service-ngamakhasimende lwanamuhla elichaza Technical University of Berlin.
Miningi imisebenzi olunikezwa amandla ethu eziyisikhombisa ukhonza ekwakheni isixhumanisi esiyingqayizivele phakathi natural sciences kanye technical ngakolunye uhlangothi, futhi ekuhleleni, ezomnotho kanye nesayensi yezenhlalo Abantu ngakolunye. Ngempela Lokhu kuyimpumelelo eziphawulekayo for eyunivesithi lobuchwepheshe.
Lezi eyala thola nkulumo aphathekako azungeze 40 Bachelor kanye 60 izinhlelo Master sika. Eziningi zalezi ngempela esiyingqayizivele. Technical University of Berlin iyona eyunivesithi kuphela enhlokodolobha esifundeni izikhonzi umnikelo engineering.
archivements ezinjalo zesayensi zakhelwe ucwaningo eyisisekelo yemvelo isayensi eyala of chemistry yemvelo, futhi mathematics, ngaphezu ngokuqinile ucwaningo nokusungula izinto ezintsha-ngamakhasimende engineering kagesi kanye sciences computer Ngokwesibonelo. TU Berlin lithole ukunconywa ngenxa yokubheka impumelelo evelele kuzo zonke lezi eyala, ngoba lesekela bunikezwa Excellence Initiative of Federal German kanye nohulumeni, German Research Foundation (DFG), the European Union, umkhakha kanye nezimali zomphakathi, futhi ogama amaqembu ucwaningo emhlabeni-class.
Enye inkomba ezisobala ukusebenza kanye ashukumisayo nokuthuthukiswa senyuvesi yintuthuko in ngezimali zangaphandle for imiklamo yayo labacwaningi basemayunivesithi nxazonke 125 million euros in 2009, ukuze circa 179 million euros in 2014. Kwaphela iminyaka, TU Berlin iye ubalwe njengenye yezinto ezinkulu emanyuvesi phezulu eJalimane ngaphandle esikoleni sezokwelapha.
Encwadini kokubiza kabi amagama obucacile Technical University of Berlin izinhloso, ngo-July 2012 Academic Senate ayavumelana wanquma ukugqugquzela umbono entsha ekucwaningeni kanye netifundziswa by ukukhomba ayisithupha eziza kuqala ucwaningo core kanye ngokuchaza sa emakhono ahlobene nezibopho social.
Solutions for zomphakathi Nezinselele.
Isicelo ezindaweni zethu Key
Materials, Ukwakha nokukhiqiza
Ingqalasizinda kanye Mobility
Lwati Communication Systems
Imithwalo Yemfanelo Wethu
Izinqubo Inenzuzo and Products
Education and Ukudala New uJobe Areas
A amasu inqubomgomo ubuhlakani ukuqokwa kuqinisekisa ekuqhubekiseleni esimeme bobukhosi in diciplines ezibalulekile.
Ngalé kwemingcele yayo siqu, kokubili wakuleli nakwamanye amazwe, iyunivesithi wethu motor, Initiator futhi lizuze amanethiwekhi eziningi zezemfundo nezobuchwepheshe nabalingani kwezesayensi embonini. imifelandawonye Strategic and imisebenzi eminingi ekuqaleni-up ukukhonza ukukhuthaza izandla-on ulwazi kanye nobuchwepheshe yokudlulisa.
abadlali Global ezifana Siemens, Telekom German, Daimler, Vattenfall
noma E.ON zinengxenye amaphrojekthi ahlukahlukene co-operative nge enyuvesi yethu kanye ukugqugquzela ubuchwepheshe kanye ukudluliswa kolwazi. I 14 izihlalo endowed nezikhungo eziningana esebenzisana nazo izikhumbuzo omuhle idumela TU Berlin sika extramural. Izinkampani hhayi kuphela ukunikeza ezitshaliwe, Banikeza izandla-on ukuqeqeshwa kanye ukusekela abafundi eziningi nezingosi ze-scholarship, inkulumo uchungechunge, futhi amathuba amahle ama-career abaneziqu. I Deutsche Telekom Innovation Laboratories kuyinto esinye sezibonelo ezivelele zalokho zokuxhumana ezifana. Umsebenzi wawo ucwaningo for ezokuxhumana nkampani futhi axhase eziningana izihlalo TU Berlin. I TU Campus ibilokhu iyikhaya endlini 'Labs' kusukela 2004, lapho azungeze 360 ochwepheshe nezazi zesayensi basekela kusukela ngaphezu 25 izizwe ukusebenza ngaphansi kophahla efanayo.
Njengoba kumdlali ezibalulekile e Berlin Brandenburg emhlabeni-class imvelo zesayensi, TU Berlin ngokukhetha ikhuthaza zokuxhumana zesayensi. Ngaphezu imisebenzi yabo evamile academic, azungeze 60 top-notch yethu abacwaningi ababonisa imisebenzi zokuphatha extramural zocwaningo. Lezi zihlanganisa Fraunhofer Society, the Leibniz Association, the Helmholtz Association kanye nezinye ezibalulekile futhi esidlangalaleni-uxhaso izikhungo zocwaningo.
I Technical University of Berlin inamathela kakhulu ekugqugquzeleni yesayensi-based ekuqaleni abantu abadala kanye spin-offs ngokunikeza isiqondiso yokwengamela nokuphathwa kwamabhange for azungeze 40 uqale-up imizamo unyaka ngamunye. Libuye futhi ukhange izinkampani nesithakazelo ekusunguleni ngokwabo noma eduze campus yethu. Ngokusekelwe imiphumela lonke competi-ni siye wathola isicoco "Exist eyunivesithi ukuqala-up".
Amazwe kuyinto Isimiso esiyisisekelo yonke imisebenzi zesayensi. Isu jikelele wale nyuvesi ithobela nomqondo icebo lokusebenza ngokubambisana zamukelwe emayunivesithi aphambili aphesheya. Lezi zihlanganisa TU Warsaw, TU Trondheim, TU Delft futhi TU Vienna. Lokhu kusebenzisana ukukhonza ukubambisana olubanzi olubhekela ukukhuthaza imisebenzi ohlukahlukene ngokuhlanganyela ucwaningo kanye nokufundisa. Isakhiwo okunye block siqukethe ukubambisana amasu nezikhungo kwesayensi kwelitshe ezifundeni ezintathu Eastern Europe, South-East Asia le South yeMelika. TU Berlin okwamanje unikeza 26 izinhlelo ezimbili-degree ngokuhlanganyela emayunivesithi partner eNgilandi, France, Poland, China, Russia neChile, Ngaphezu kwe 17 izinhlelo lesiNgisi Master sika. Abafundi International kusukela ngaphezu 130 amazwe bakha mayelana 20 amaphesenti angu umzimba umfundi. In the Alexander von Humboldt oyisikhulu, TU Berlin okwamanje lifaka owesibili phakathi wonke amanyuvesi ezobuchwepheshe. Izincwajana zemininingwane izibalo eminye zisigcizelela ndlela le nyuvesi interna-nziwa: TU oprofesa yedwa babehileleke 1500 cross-border cooper-indalo amaphrojekthi phakathi 2009 futhi 2011. Ngo 2012, azungeze 120 Izivumelwano isayensi oMhlaba, singasebenzi nganoma ephakathi ezingeni enyuvesi.
Mathematics kanye natural sciences
Inqubo sciences kanye ne-engineering
Engineering kagesi kanye computer science
zobunjiniyela Mechanical futhi ezokuthutha (kuhlanganise wobunjiniyela bezindiza, ubunjiniyela yezimoto, yemikhumbi yempi ocean ubunjiniyela, kanye nokuhlela futhi ukusebenza kwezithuthi izinhlelo)
Ukuhlela - ekwakheni - imvelo (uhlangane izikole yangaphambili “ubunjiniyela kanye Geosciences isicelo” futhi “izakhiwo -environment - umphakathi”)
On 1 April 1879, le Royal Institute of Technology Charlottenburg (“TH Charlottenburg”) kwamiswa nokuhlanganiswa sikahulumeni Berlin Isakhiwo Academy (Bauakademie) futhi Royal Trade Academy (Royal Gewerbeakademie), ezimbili ezimele Prussian ekusungulweni amakolishi elisungulwe 1799 futhi 1821 ngokulandelana. I TH Charlottenburg (Royal TechnicalHigher School of Charlottenburg) yethiwa idolobha nendawo Charlottenburgjust ngaphandle Berlin. Ngo 1899, le TH Charlottenburg baba polytechnic kuqala eJalimane zobudokotela yokunikeza, njengoba degree indinganiso ababethweswa iziqu, ngaphezu amadiploma, sibonga Uprofesa Alois Riedler futhi Adolf Slaby, usihlalo we-Association of German Onjiniyela(VDI) ne-Association for kagesi, Elekthronikhi Information Technologies (VDE).
Ngo 1916 eside ukuma Imayini Academy Berlin, the Prussian izimayini Academy owenziwa sokuma Carl Abrahama Gerhard e 1770 ngomyalo wabaholi King UFrederick Omkhulu, ukuthi ingxenye TH Charlottenburg. kusengaphambili, ekolishi izimayini wayekade, Nokho, amashumi eminyaka ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi Frederick William University (manje Humboldt University of Berlin), ngaphambi kokuba baphotha futhi siqhamuke 1860. Ngemva ukumuncwa Charlottenburg sika ku Greater Berlin e 1920 naseJalimane kokuba yaphenduka Weimar Republic, le TH Charlottenburg Yaphinde yaqanjwa ngokuthi i “Kobuchwepheshe Hochschule Berlin” (“TH Berlin”). Ngo 1927, uMnyango Geodesy we Agricultural College of Berlin ezahlanganiswa naleli TH Berlin. Phakathi 1930, ezinjenge kanye ukunwetshwa campus eduze “East-West-eksisi” beniyingxenye izinhlelo wamaNazi a Umhlaba Capital Germania, kuhlanganise ubuhlakani esisha kobuchwepheshe ukuzivikela esengaphansi Karl Becker, eyakhelwe njengengxenye edolobheni elikhulu zezemfundo (University City) ku eduze entshonalanga ohlakaniphe Grunewald ihlathi. Ukwakhiwa igobolondo wahlala sidle ngemva kokugqashuka kweMpi Yezwe II nangemva ukuzibulala Becker sika e 1940, it is namuhla imbozwe emikhulu Teufelsberg ulahla.
Isigaba enyakatho isakhiwo main of the nyuvesi labhujiswa lapho kuhlaselwa ngamabhomu ngoNovemba 1943. Ngenxa mgwaqo fightingat ekupheleni kwempi yezwe yesibili, imisebenzi ngesikhathi TH Berlin bamiswa ngo-Ephreli, 20th 1945. Ukuhlela i-ukuvulwa kabusha lesi sikole siqala ngo-June, 2nd 1945, uma rectorship esebenza eholwa Gustav Ludwig Hertz kanye noMax Volmer waqokwa. Njengoba kokubili Hertz futhi Volmer wahlala ekudingisweni eSoviet Union isikhashana ukuza, ekolishi awuzange kabusha emisa kuze April, 9th 1946, manje onegama “University of Berlin”. Ngenjwayelo, igama ayikahunyushwa kwezinye izilimi. AmaNgisi eside Berlin Institute of Technology iyinguqulo lulwimi esemthethweni, eyasungulwa njengoba ukusilela e 2007. Noma kunjalo, ukuhumusha enembileTechnical University of Berlin uhlala ezivamile (nakuba ayengazi olusemthethweni) igama enyuvesi ngesiNgisi, ngaphandle okungenzeka incazelo bomdabu German (futhi yebo ifomu esifushane TU Berlin).
Uyafuna xoxa University of Berlin ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Berlin kumephu
Izithombe: Technical University of Berlin Facebook ezisemthethweni
University of Berlin Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa of University of Berlin.
eCharité – Medical University of Berlin Berlin